Inqubomgomo yobumfihlo Inqubomgomo yobumfihlo
Lapho wayala noma ukubhalisa kwi site lethu, njengoba kufanele, ungase ucelwe ukuba ufake igama lakho, ikheli le-imeyili noma eminye imininingwane ukukusiza ngolwazi lwakho.
Siqoqa ulwazi kusuka kuwe uma ukubhalisela iphephandaba noma faka imininingwane kwi site lethu.
• Ukuze sikwazi kangcono kuwe in ukuphendula izicelo zakho service yekhasimende.
• Ukuze uthumele i-imeyili ngezikhathi ezithile mayelana oda lakho noma kweminye imikhiqizo namasevisi.
Asisebenzisi sengozini ukuskena kanye / noma ukuskena ezindinganisweni PCI.
We kuphela sihlinzeke izihloko kanye nokwaziswa. We never ukubuza ezinombolweni zamakhadi okuthenga ngesikweleti.
• Asidingi i-SSL ngoba:
Akukho ukuthengiselana ukukhokhelwa abathintekayo
Asisebenzisi amakhukhi ngezinhloso kokulandela
Uma uvula amakhukhi off, ezinye izici lizokhutshazwa. ezenza isayithi lakho isipiliyoni othe xaxa futhi kungenzeka zingasebenzi kahle.
isixhumanisi Zethu Inqubomgomo yemfihlo kuhlanganisa elithi 'Inqubomgomo’ futhi kalula itholakala ekhasini esishiwo ngenhla.
Kubalulekile futhi ukuqaphela ukuthi asivumeli third-party yokulandelela yokuziphatha
Uma kuziwa ukuqoqwa kokwaziswa komuntu siqu kusuka izingane ezineminyaka engaphansi kweyi- 13 iminyaka budzala, Online Privacy Protection Act weZingane (CUP) ubeka abazali control. The Federal Trade Commission, I-united states’ Ukuvikelwa kwabathengi agency, isebenzisa owayo Rule COPPA, okuyinto sicacisa ukuthi yini opharetha amawebhusayithi kanye namasevisi online okumelwe akwenze ukuze sivikele ubumfihlo yezingane okuphepha aku-intanethi.
Asazi ngokuqondile emakethe izingane ezineminyaka engaphansi kweyi- 13 iminyaka budzala.
futhi sizokwenza ngokushesha asuse kuzo zonke singesihambelanayo.
Last ehleliwe on 2017-01-25